Macalin Axmed iyo Haweeya: Waa qiso dhacday oo duruufo iyo waayo qalafsan dhex-jibaaxaysa. Q/1aad. - Jowhar somali news leader
By hanad	 On Oct 7, 2021
Qarnigii sagaal iyo tobnaad badhtamihiisii, waxa gelbeedka dhulka Somalida meel ka mid ah, macalin ka ahaa nin la odha jiray macalin Axmed oo caruurta Qur’aanka u dhigi jiray.
Macalin Axmed, waxa uu guur la’aan ku gaadhay da’aha kontomaadka isaga oo awoodi-kari-waayay, in uu bixiyo geelii faraha badanaa ee xilligaa hablaha yaradka looga qaadan jiray.
Macalin Axmed, waxa caruurta uu Qur’aanka u dhigo mushqaayad ahaan uga qaadan jiray, qaalin geel ah oo la gudoonsiiyo marka uu ardayga 30ka Jis ee Qur’aanka ah dhameeyo. Nasiibdarrro se, ardaydu inta badan 30ka Jis ee Qur’aanka ah may dhamayn jirin. Sababtuna waxay ahayd, bulshadii ay ka soo jeedeen ayaa ahayd reer guuraa hadba dhinac u hayaanta.
Inkasta oo macalin Axmed uu ahaa nin konton sano baarka ka jaray, oo ay calaamadihii da’duna ka muuqdaan, hadana waxay duruufaha iyo waayuhu ku qasbeen in uu habeenkii kaligii Ardaa cidla’a dhaxanta iyo dabaysha ku weheshado.
Waxa se taa kaga sii lur iyo xanuun badnayd, marka uu maqlo dam-damta iyo damaashaadka aroosyada ee habeen iyo maalin ay dhagihiisu ka ladi-la’yihiin.
Iyada oo ay arrintaasi ku abuuraysay, hanqaaran iyo hiyikac xoog badan oo qalbigiisa sida dabaylaha u gil-gilayay.
Macalin Axmed waxa uu hadba halacsiga daymada indhaha ku dhuftaa, gabadh daruurtaa u eg oo loo galbinayo wiil uu da’ahaan dhali karo, laakiin se nasiibka iyo waayuhu kala hor mariyeen. Waxa uu marba is waydiiyaa, goorta uu isna aroos ilo-xidhan u galban doono.
Waxa uu xaalku sidaa ahaadaba, habeenada iyo maalmuhuna isda socdaanba, waxa goor aroor ah macalin Axmed oo ardaydiisii Qur’aanka u subcinaya la soo joogsaday, nin la odhan jiray Guuleed iyo wiil yar oo uu dhalay oo isna Hirad la odhan jiray.
Guuleed waxa uu ka mid ahaa, dagmada uu macalinku caruurta Qur’aanka ugu dhigo. Sidoo kalena guuleed iyo macalin Axmed aqoon fiican, ayay isku lahaayeen.
Hadaba markii la isbariidiyay, xaaladda iyo waayahana la is warsaday, Guuleed waxa uu macalin Axmed ka codsaday in uu wiilkiisa 30ka Jis ee Qur’aanka ah, u dhameeyo.
Waxa kale oo uu Guuleed intaa raaciyay, haddii aad macalin Axmedoow wiilkan u 30Jis ee Qur’aanka ah u dhamayso, anna waxaan siin doonaa Inantayda Haweeya.
Macalin Axmed markii uu maqlay hadalkaa dhagihiisa ku soo dhacaya, waxa uu u maleeyay in uu riyoonayo, hadalka uu maqlayaana yahay dhalanteet iyo riyo habeenimo.
Isaga oo macalin Axmed Su’aal dag-dag ah ku celiyay Guuleed, kana codsaday in uu mar labaad ugu celiyo hadalkii uu yidhi. Guuleedna waxa uu mar labaad ugu celiyay hadalkii uu yidhi oo ahaa, “inantayda Haweeya ayaan ku siin doonaa, haddii aad macalin Axmedoow Hirad 30ka Jis ee Qur’aanka ah u dhamayso”.
Macalin Axmed markuu rumaystay in hadalka Guuleed ka soo yeedhayaa uu yahay in la siin-doono Haweeya oo raggii boqolka halaad haystayba ka huleeleen, waxa ku soo da’ay daruuro farxad iyo bushaaro xambaarsan oo shucuurkiisii sida dhibicda roobka ugu hooray. Waxaana la arkayay isaga oo ay dareen-wadayaasha jidhkiisu gabi ahaanaba la kurbaynayaan farxadda iyo ray-raynta hadhaysay.
Markii uu Guuleed inta uu Hirad gacanta ka galiyay macalin Axmed una dhaqaaqay jahadii uu reerkiisu xigay, waxa la arkayay macalin Axmed oo sidii qof naxsan Hirad gacanta ka buuxsaday.
La soco qaybo kale oo xiiso leh iyo halka uu xaal kuu denbeeyo.